Maraykanka Oo Si Cadho Leh Uga Hadley Dekada Jabuuti Ee Laga Wareejiyay DP World | Berberatoday.com
Maraykanka Oo Si Cadho Leh Uga Hadley Dekada Jabuuti Ee Laga Wareejiyay DP World
March 7, 2018 - Written by Berbera Today
Jabuuti(Berberatoday.com)-Jeneraalka ugu sareeya ee saldhigga ciidammada Maraykanka ee
Jabuuti ayaa xildhibaanada Aqalka Congress-ka Maraykanka u sheegay in ay aad uga walwalsanyihiin suurtogalnimada in Shiinaha uu la wareego dekada Jabuuti ee dhawaan laga wareejiyay shirkadda Imaaraatka laga leeyahay ee DP World.
Waxa uu sheegay in ciidammadda ay wajihi doonaan “cawaaqib daran” haddii Shiinaha uu halkaas soo galo.
Dowladda Jabuuti ayaa bishii hore DP World ka wareejisay maamulka dekada Dooraale ee ay kasoo degaan qasacadaha qafilan ee xamuulka (kunteenarada), iyada oo sheegtay in shirkadda ay xalin weysay muran soo jiitamayay illaa sanadkii 2012-kii.
DP World ayaa go’aanka dowladda Jabuuti ku tilmaamtay mid sharci daro ah, waxayna dacwad ka furatay maxkamadda caalamiga ah ee dhexdhexaadinta London.
Dhagaysi ay u fariisteen xildhibaanada Congress-ka Maraykanka maalintii talaadada ayaa inta badan waxaa hareeyay kaalinta sii kordhaysa ee Shiinaha ku yeelanayo Afrika, waxayna sheegeen in ay ka warheleen warar sheegaya in Jabuuti ay dekada ula wareegtay si ay hadiyad ahaan ugu siiso Shiinaha.
Jeneraal Thomas Waldhauser oo madax ka ah taliska Maraykanka ee Afrika ayaa sheegay in haddii Shiinaha ay xayiraado kusoo rogaan isticmaalka dekada, in taas ay saamayn doonto in maraakiibta dagaalka Maraykanka ay shidaal ka qaataan meesha.